Electric kana chiutsi Heat Hot Air Food Kuomesa Machine - China Qingdao rakadzikama Machinery
Electric kana Steam Heat Hot Air Food Kuomesa Machine ari kunyanya akakodzera kuomesa basa mishonga nyama zvokudya pashure mukuru tembiricha mbereko, miriwo zvigadzirwa, duku epurasitiki pasuru zvinhu kana Vacuum pasuru zvigadzirwa. Zvokudya anoiswa pamusoro Stainless simbi chidzitiro bhandi (yakaitwa kubudikidza 12-60 yepasi Stainless simbi mambure), chidzitiro bhandi ichifamba anobuda uye shure kuomesa bhokisi. The chikuru kudziyisa Nzira iri yemagetsi kudziyisa, hwemvura kudziyisa uye mhepo inopisa kudziyisa. The Hot mhepo anogona kuenda ...
Electric kana Steam Heat Hot Air Food Kuomesa Machine ari kunyanya akakodzera kuomesa basa mishonga nyama zvokudya pashure mukuru tembiricha mbereko, miriwo zvigadzirwa, duku epurasitiki pasuru zvinhu kana Vacuum pasuru zvigadzirwa.
Zvokudya anoiswa pamusoro Stainless simbi chidzitiro bhandi (yakaitwa kubudikidza 12-60 yepasi Stainless simbi mambure), chidzitiro bhandi ichifamba anobuda uye shure kuomesa bhokisi. The chikuru kudziyisa Nzira iri yemagetsi kudziyisa, hwemvura kudziyisa uye mhepo inopisa kudziyisa. Mhepo inopisa rinogona kupinda napakati makwanza kwezvokudya chiutsi iri kudururirwa kubva makomba mwando pedza. Kuomesa bhokisi iri rinoumbwa anoverengeka zvikamu, kana uchida kuchengetedza nzvimbo, kuti kudziyisa zvikamu zvinogona kuitwa sezvo Multi rukoko mhando. Kureba chikuva ndiyo 6-40m, zvokurwisa nohupamhi iri 0.6-3m.
Previous: Pickled Vegetable Processing Machine Line
Next: Water Bath mwaya Milk Pasterization Machine
mhepo nokuomesa muchina
mabhanana chip Vacuum chakabikwa muchina
mufarinya chakabikwa muchina
huku chakabikwa muchina
machipisi chakabikwa muchina
chinopfuurira chakabikwa muchina
yakadzika chakabikwa muchina
zai chakabikwa muchina
zai zvigadzirwa kubudiswa mutsetse
hove chakabikwa muchina
zvokudya mhepo nokuomesa muchina
zvokudya kusanduka zvikwama mhepo nokuomesa muchina
zvokudya pasuru rokutsvaira nokuomesa muchina
zvokudya pasuru simba chando mhepo nokuomesa muchina
zvokudya pasuru pemvura mhepo nokuomesa muchina
French fries chakabikwa muchina
michero uye miriwo nokuomesa muchina
michero Vacuum chakabikwa muchina
chakabikwa machipisi muchina
chakabikwa muchini nezvikafu zvishoma
chakabikwa muchina tudyo zvokudya
gari chakabikwa muchina
maindasitiri chakabikwa muchina
KFC chakabikwa muchina
hanyanisi chakabikwa Machine
nzungu chakabikwa muchina
epurasitiki bhegi pasuru Dryer
nyama yenguruve ganda chakabikwa muchina
tudyo chikafu chakabikwa muchina
Vacuum chakabikwa muchina
Vacuum chakabikwa muchina mutengo